Ololaha Wacyigalinta Tahriibinta
"Waxaan u isticmaalaa mid ka mid ah kanaalkayga YouTube-ka filimmo gaagaaban iyo kan labaadna wararka naxdinta leh. Waxaan soo geliyaa waxyaabo cajiib ah, kaliya maahan tahriibinta, waxyaabaha kalee oo aad u adag in la aamino. Waxaan u isticmaalaa kanaalkayga saddexaad ee YouTube-ka ciyaaraha. ”
Nakhlan walaalkiis wuxuu doonayey inuu badda kaga gudbo Yurub tahriib, laakiin waligiis ma awoodi karin. Nakhlan wuxuu ku faraxsan yahay in walaalkiis uusan isku deyin. Markuu maqlay in mid ka mid ah asxaabtiisa uu ku dhintey shil doon oo ka baxsan Alexandria, aad ayuu u naxay. 300 oo qof ayaa qariqmay markii markabkaasi uu degtay.
"Runtii, taasi waxay naxdin igu noqotay ! Waxaan la yaabay waxa ay fakarayaan. Khatarta ayaa u ahayd iyaga, maxay sidaas u samaynayaan?
Dhacdadan naxdinta leh ayaa ku kalliftay Nakhlan inuu u adeegsado xirfadihiisa warbaahinta bulshada ee saameynta leh si uu u bilaabo olole wacyi gelin ah oo uga digaya dhalinyarada Soomaaliyeed safarkan khatarta ah. Wuxuu doonayaa inuu iyaga siiyo runta. Wuxuu aad u dhaleeceeya dadka marka ay gaadhaan Yurub bilaabaan inay ku dhajistaan ​​sawirro iyo sheekooyin wanaagsan oo ku saabsan noloshooda wanaagsan ee halkaas. Tani waxay ku sasabtaa dadka kale inay isku dayaan inay raacaan. Wuxuu kaloo isku dayayaa inuu kashifo beenta tahriibiyeyaasha sheegta safarka inuu yahay mid dhakhso badan oo fudud.
"Waa dad fursado iyo faa'iido-doon ah, maxaa yeelay iyagu ma hayaan wax bini'aadminimo. Markaad 300 oo qof ku qaadatid doon yar oo gaado 50 qof oo keliya, taasi waa hunguri iyo fursad."
Nakhlan wuxuu leeyahay way adagtahay in la badalo fikirka dadka, aaminaada ah inaad si sahlan ku tagi karto Yurub adoo caawinaya tahriibta. Taasi waxay u baahan tahay dadaal wacyigelin oo joogto ah. Wuxuu sheegay inuusan waligiis ka daali doonin u sheegista dadka khataraha safarka aan caadiga ahayn. Wuxuu noqday olole wacyigelin hal-nin ah.